Tsy maintsy sorena ihany anefa ny tena rehefa tena mahatsapa hoe heverinareo ho donendrina sy mitelina fotsiny izay lalitra fahananareo anay. Dia inona izao no dikan’izay fankasitrahanareo ny Raiamandreny miteny nefa tsy hotanterahinareo na oviana akory ny zava-dazainy ? Firy taona izay ianareo miteny fa tsy mety ny ataonareo kanefa dia mbola tohizanareo ihany ? Izany hoe mahafalifaly ny olona kosa aloha ilay fihetsika kidaladala ataonareo matetika e ! Manapaka ny tsinainy mihitsy aza indraindray ka zaranareo aza izy verivery dia amin’ireny dia tsy tsaroany intsony ny fampijabahana ataonareo aminy. Sambatra ihany rangahy izahay manana mpitarika mahatsikaiky toa anareo a !